Ireo siny telo an'ny mpandahateny amin'ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Alarobia, Aprily 10, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Herinandro nahagaga tokoa ity tao amin'ny World Media Marketing World! Nandamina fivoriana iray momba ny famahanam-bolongana orinasa aho Justin Levy ary Tubsety Waynette. Justin no mitarika ny fiampangana azy amin'ny Citrix ho an'ny tetikadin'izy ireo ara-tsosialy sy atiny, ary i Waynette dia mitarika ny fanampian'ny ezaka paikady atiny SAS. Olona roa mahatalanjona izay mihazakazaka paikady goavana sy mahomby.
Hatramin'ny naha-antonony ahy dia tsy maintsy nangina aho ary nifikitra tamin'ny fanontaniana izay namotopototra ireo paikady napetrak'ireo fikambanana roa hampitomboana ny ezak'izy ireo. Mety ho voalohany ho ahy io :). Ka i Justin sy i Waynette no nisongadina… ary na dia niasa tamina orinasa roa samy hafa tanteraka aza izy ireo, dia misy taonina mitovy amin'ny politika, drafitra, dingana ary fandrefesana napetrany.
Ny tena namelombelona dia tsy nanao izany izy ireo feo toy ny mpandaha-teny eo amin'ny haino aman-jery sosialy. Tsy nilaza zavatra mahatsikaiky momba izany izy ireo manoratra izay tianao, tadiavo ny akany, ataovy fotsiny na ny banga hippy sy teoretika hafa izay tsy miasa afa-tsy ao anatin'ny pejin'ny boky media sosialy be mpividy indrindra sy ao an-tsain'ny mpamorona azy.
Rehefa matotra ity indostria ity dia manomboka hitako tokoa ny fisarahana misy eo amin'ny fahalalana, ny traikefa ary ny fahitana ireo mpitarika ny marketing ara-tsosialy. Mino aho fa latsaka anaty siny 3 izy ireo:
mpanao - mpandahateny izay mizara fahitana momba ny ezaka ataon'izy ireo manokana amin'ny fampivelarana, fanatanterahana ary fitsapana ny fampielezana haino aman-jery sosialy hitazomana ny orinasan'izy ireo hanana tombony sy hitombo. Justin sy Waynette dia ohatra tsara, ary koa maro amin'ireo mpitarika maso ivoho eo amin'ny habakabaka.
Teôlôjiana - ireo no bandy mamorona teny marketing vaovao, manoratra boky ary miresaka momba ny teôria izay mbola tsy voasedra na zara raha nosedraina. Izy ireo dia mahazo fidiram-bola be amin'ny fivarotana boky, lahateny ary fakan-kevitra momba ny orinasa sasany. Indraindray izy ireo dia manavao sy manome fomba fijery vaovao momba ny olana misy - fa matetika ny torohevitra omen'izy ireo dia fluff tsotra fotsiny.
mpivarotra - na dia mandray soa amin'ny firesahana sy mizara ny fanatsarany ny valin'ny mpanjifa aza ireo masoivoho dia tsy manandrana mandresy na mivarotra mpikambana mpihaino amin'ny alàlan'ny famolavolana ny hafatra manodidina ny sehatra manokana izy ireo. Ny olana amin'ireo mpivarotra dia samy miady amin'ny tetibola izy rehetra ary mino izy ireo fa ivon'izao rehetra izao. Raha manana sehatra SEO ianao dia ny SEO no valiny. Raha manana sehatra Media Sosialy ianao dia ny Social Media no vahaolana. Raha manana sehatra mailaka ianao dia ny mailaka no valiny.
Nisy fifandanjana matanjaka tao amin'ireo siny telo tao amin'ny World Media Marketing World ary tena tsapako fa manana tombony manokana aho ho mpandahateny izay nampidirina imbetsaka. Somary sosotra ihany aho, amin'ny tranga sasany izay ahitako ny siny # 2 sy # 3 be loatra. Fantatro fa mitanila aho satria mpampihatra antsika… fa rehefa miresaka amin'ireo mpanatrika aho dia mitovy hatrany ny valiny… ahoana no hataoko mampihatra ireo paikady ireo.
Tsy manatrika fihaonambe ny mpanatrika raha tsy misy fampiasam-bola… sidina, hotely, tapakila, sakafo… fampiasam-bola tsara ho an'ny ankamaroan'ny mpanatrika. Zava-dehibe ny handaozan'izy ireo ny fihaonambe miaraka amin'ny fampahalalana ilainy handrosoana ny programa. Faly aho fa ny olona ao amin'ny Social Media Examiner dia nandanjalanja toy izany teo amin'ny lalan'izy ireo - raha ianao misoratra anarana amin'ny tapakila virtoaly, ho azonao ny fampahalalana ilainao! Tsy ny seho rehetra no nanao… fa mihoatra ny ampy hanaovana izay mahamety azy!
Hitako fa nandingana ny siny 2 sy 3 aho ary nandamina ny fanatrehako manokana manodidina ny siny 1.
Tags: sampan-draharahampanaofivorianasmmwmpitarika media sosialytontolon'ny varotra sosialympandahateny amin'ny media sosialyMitenympivarotra
Ataovy mandeha amin'ny laoniny ny fampielezana marketing amin'ny influInfluence
Apr 11, 2013 amin'ny 9: 22 AM
"Raha manana sehatra SEO ianao, ny SEO no vahaolana. Raha manana sehatra Media Sosialy ianao dia ny Social Media no vahaolana. Raha manana sehatra mailaka ianao dia ny mailaka no vahaolana. ” Marina loatra izany. Midika izany fa izay rehetra mampiasa sehatra iray dia mampiasa azy noho ny antony iray. Na izany aza, na dia mety ara-dalàna aza ireo antony ireo ary mifototra amin'ny tena tohan-kevitra, dia tsy faratampony izy ireo ary mety hanana tombony ihany koa ireo sehatra hafa. Tokony hijery ny olana amin'ny fomba fijery isan-karazany ny olona.